3 yeakanakisa emahara dzimwe nzira dzeCcleaner paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kana wanga uchifamba kubva paWindows, ndinenge ndine chokwadi chekuti unoziva, wateerera kana kushandisa CCleaner inova imwe yeanogonesa uye system cleaners. CCleaner, yakasimba uye inozivikanwa kuchenesa yeWindows iyo inotsvaga uye inobvisa majee mafaira, ruzivo rwepachivande senge kubhurawuza cache uye nhoroondo, kusunungura nzvimbo uye nezvimwe.
Rega ndikuudze mira Muchiitiko cheLinux zvinhu zvakati siyanei sezvo mafaera enguva pfupi abviswa mune akawanda maLinux kugovera. Kunyangwe kana tiine maturusi akati wandei ekuchenesa michina yedu.
3 Stacer Sisitimu Inosuka
BleachBit iri yemahara uye yakavhurwa sosi diski nzvimbo yekuchenesa, yakanyorwa muPython chirongwa chemutauro uye inoshandisa PyGTK, uyu maneja wepachivande uye system optimizer.
Inobatsira kuchenesa system yako, kusunungura disk nzvimbo, kuderedza backup nguva uye kugadzirisa kwese system mashandiro.
Izvo zvakare zvinokubatsira iwe kuchengetedza zvakavanzika ne shredding mafaera (chero rudzi rwefaira) kuviga zvakachengeteka zvirimo uye kudzivirira data kupora, uye inodhira yemahara dhisiki nzvimbo yekuvanza zvakachengeteka mafaira akambodzimwa.
Kuzivikanwa uye kubviswa kwewebhu cache, makuki eHTTP, nhoroondo ye URL, mafaera enguva pfupi faira uye Flash makuki eFirefox, Opera, Safari, APT, Google Chrome uye nezvimwe.
Kubvisa nzvimbo dzisiri kushandiswa (inonziwo mafaira enzvimbo) idzo dudziro yesoftware
Shred mafaera uye bvisa isina kupihwa diski nzvimbo kudzikisira kudzora dhata
Iyo ine sarudzo yekugona kuchenesa iyo isina kuisirwa diski nzvimbo yekuvandudza iyo data compression ratio ye diski yemifananidzo backups
Raira mutsara interface ye script automation uye akasiyana mashandiro.
FSlint iri yemahara, yakavhurwa sosi, yakapusa uye yakapusa kushandisa kunyorera kutsvaga nekuchenesa akasiyana siyana mafaera pane Linux faira system. Iyo ine GTK + GUI uye yekuraira mutsara interface iyo inokutendera iwe inobvumira kuita mamwe mashandiro kuburikidza nezvinyorwa.
Inobatsira kubvisa zvakapetwa mafaera paLinux, tsvaga uye bvisa madhairekitori asina chinhu, mafaira asina kushandiswa enguva pfupi, zvikanganiso zvisingadiwe uye zvinonetsa mumafaira nemazita emafaira, ma symlinks akaipa, kuchengetedza system yako yakachena.
Mushure mekuita ese ari pamusoro mashandiro, iwe unozotora diski nzvimbo yanga ichichengetwa neasina basa uye asingadiwe mafaera achigara pane yako faira system.
Pakati pemabasa akatanhamara atingaite neFSlint sekutsvaga kana kudzima tinowana:
Mazita asiri iwo
Zvitupa zvisiri izvo
Mabinaries ane ruzivo rwekugadzirisa
Stacer Sisitimu Inosuka
Stacer iri yemahara yakavhurwa sosi sisitimu yekugadzirisa turu yeLinux masisitimu, ine yakashongedzwa uye inonzwisisika GUI. Anouya iine hunhu maficha iwe aunotarisira kubva kune system optimizer uye zviwanikwa tarisa chaiyo-nguva system yekuchenesa, senge system yekuchenesa.
Dashibhodhi yako yakagadzirirwa zvakanaka uye inokupa iwe kuwana kune hupfumi hwesisitimu ruzivo; inokutendera kuti ubvise maappache eapps, ongorora kutanga system, kutanga / kumisa system services, uye kunyangwe kusunungura maapplication. Uyezve, inonyatsoenderana nekutaridzika uye kunzwa kweyakafanogadzirirwa system.
Pindai Iwo makuru maficha eStacer ndeaya:
Intuitive uye inoratidzika interface.
Iyo ine Dashibhodhi inoratidza kushandiswa kweCPU yedu, Memory, Diski uye neruzivo rwezvishandiso zvemidziyo yedu nehurongwa hwekushandisa.
Mikana yekutarisa uye kuchenesa mafaera kubva kuApt Caché, Crash Reports, System Logs, App Caché.
Iyo inokutendera iwe kusarudza izvo zvinoshandiswa uye masevhisi ekumhanyisa kana yako yekushandisa system yatanga.
Iyo inotipa iwo mashandiro ekumisikidza uye kusaita masevhisi nekukurumidza uye nyore.
Yakashongedzerwa neakanakisa-imwechete-tinya package uninstaller.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » 3 yeakanakisa emahara dzimwe nzira dzeCcleaner paLinux